प्रचण्डले भने- लास्ट पर्‍यो भने नयाँ क्रान्ति सुरु गर्छु ! | Ignite Infosys Pvt. Ltd.
प्रचण्डले भने- लास्ट पर्‍यो भने नयाँ क्रान्ति सुरु गर्छु !
२४ कात्तिक, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दुश्मनले अहिले पनि माओवादी नेताहरुलाई बदमान गर्ने र मार्ने षड्यन्त्र गरिरहेको बताएका छन् । तर, पार्टीका नेता-कार्यकर्ताहरु सशस्त्र द्वन्द्वकालमा जस्तो नेतृत्वको रक्षामा नउत्रिएको उनको गुनासो छ ।
अखिल क्रान्तिकारीको अगुवा कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै माओवादी अध्यक्षसमेत प्रचण्डले द्वन्द्वकालको फौजी आक्रमणलाई सम्झिए । दुश्मनहरुले नेताहरुको टाउको काटेर ल्याउ भन्दा आफूहरुले फौजी हमला गरेर त्यसको जवाफ दिने गरेको प्रधानमन्त्रीले बताए । उनले भने- राक्षस एवं दाह्रा नङ्ग्रा भएको जस्तो देखाइन्थ्यो, नेतृत्वको टाउको काटेर ल्याउ भन्दा घृणा होइन, गर्व महसुस हुन्थ्यो । तर, अहिले कन्फ्यूजजस्तो देखिएको छ ।’
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले कार्यक्रममा भने- दुश्मन प्रष्ट छ र फेरिएको छैन । तर, हामी फेरिएका छौं र गल्ती यहीँ भएको छ ।’
माओवादीले भरुवा बन्दुक चलाउँदा दुश्मनले मेसिन गन हानेको जस्तो भएको प्रचण्डको विश्लेषण छ । विगतमा दुश्मनले चलाएको भ्रम चिर्दा आनन्द मान्ने आफ्ना नेता कार्यकर्ताहरु अहिले आपसमा झगडा गर्न लागेको भन्दै प्रचण्डले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।